Paradaịs Site na Dashboard: Contlọ Ọrụ Ọdịnaya na Ad Control
Monday, August 23, 2010 Sunday, October 4, 2015 Matt Chandler kwuru
Otu n’ime ihe mere m ji kpọọ asị Facebook bụ ozi ya nke itinye ihe niile n'otu ebe. N'aka nke ọzọ, nke ahụ bụkwa ihe mere m ji hụ ya n'anya.
Site na ọtụtụ ọrụ na-agba mbọ maka uche anyị, yana ọtụtụ ntanetị ị na-achịkwa, afọ nke iji otu ngwanrọ iji nweta otu ihe mgbaru ọsọ ka ọ nwụrụ dị ka Dillinger. Dị ka ndị ahịa, a na-atụ anya ka anyị na-elekọta mgbasa ozi Facebook, nyocha akwụ ụgwọ, SEO, Twitter, blọọgụ, nkọwa, mkparịta ụka… ndepụta na-aga n'ihu.
Anyị mere ka ọnwa na weghachite a ọtụtụ ugboro na ugboelu na-enwe obere Mgbakọ ike dị ka a n'akpaaka mgbako. Ugbu a afọ 40 ka e mesịrị, enweghị ihe ngọpụ maka enweghị ike nyochaa, agafeghị oke ma tụọ ọdịnaya ịntanetị sitere n'ọtụtụ isi. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ime karịa ịbịanye aka: ha kwesịrị ịma kpọmkwem otu ụzọ ntanetị ọ bụla si enyere aka na akara ala.
O zughi ire ndị ahịa ụfọdụ kwụọ ụgwọ kwa Pịa mgbasa ozi na ebe iyi egwu nke blog, Facebook na Twitter. Anyị ga-achịkọta data, tụọ mmetụta na mmetụta, ma nyochaa ịdị irè.
Ọ dabara nke ọma na e nwere ụfọdụ oké software dị ka ọrụ (SAAS) ngwa ọdịnala na-enyere gị aka API imepụta dashboard – iwu zuru ezu na ebe nchịkwa – maka mgbasa ozi n'ịntanetị. Fọdụ nwere oke ikike, ndị ọzọ nwetara gị ihe niile na kichin kichin. Fọdụ achọghị ezigbo aka ọrụ aka, ndị ọzọ chọrọ ezigbo ahụmịhe nchịkọta. Ihe niile bụ ihe ịchọrọ, ihe ebum n’uche gị, na akụnụba ị nwere iji kwado nsogbu a.
Ihe ha niile nwekọrọ bụ na ha na-ewetara gị nlele anya nke ntanetị gị na ntanetị, ma kwe ka gị na ndị otu gị zaghachi ya. Ọtụtụ n'ime ha soro akụkọ ihe mere eme data yiri a web analytics ngwugwu. Karịa naanị otu usoro ịhazi usoro, ha bụ ngwaọrụ zuru ezu maka nlekota, itinye aka na nyocha ma na desktọọpụ gị, na weebụ, ma ọ bụ na ekwentị mkpanaaka.
A nkenke ndepụta nke ihe atụ:
onye na -eso ụzọ
Onye Alterian SM2
Emehiela: nnukwu, ụlọ ọrụ kachasị aga nke ọma na egwuregwu mmekọrịta na-eji ngwaọrụ ndị a. Dika ngwa dashboard di nma ma tinyekwuo oru, ngalaba ndi n’ile anya dika NASA. Ma ha bụkwa ezigbo nhazi, na-enye otu nghọta ahụ maka ụdị ndị obere na obere, ma na-enye ha ohere ịkọwa mmefu mmefu ha site n'igosi ọnụọgụ maka ọrụ.
Tags: mmmmmmmmmmmmmonyeka alteria sm2mkpọtụmpiakụrụngwa marinikeọnụọgụgụObinna 6mmekoritaonye na -eso ụzọ
Matt bụ Digital Content Manager maka Teknụzụ Nche na Ingersoll Rand, na bụ onye nkuzi adjunct nke Web Marketing na Artlọ ihe osise nke Indianapolis. Ọ nwere ihe karịrị afọ 10 nwere ike ịmepụta atụmatụ na ijikwa ọdịnaya ịntanetị maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gụnyere Udiri, Ulọ Ọrụ Ahụike NYU Langone na Network Ahụike Obodo. O nwekwara mkpokọta vinyl na-atọ ọchị na pug aha ya bụ George Benson.
Dọrọ ndị na-eso ụzọ, Azụla ha
Nọmba Hyperlink ekwentị maka Nchọgharị ekwentị
Aug 24, 2010 na 7: 44 AM
Nke a bụ nnukwu ndepụta nke akụ. Ọ dị mma ịhụ ọnụ ọgụgụ na mkparịta ụka dị n'ịntanetị na-akwado usoro mgbasa ozi gị na ngwaọrụ ndị a na-eme nke ahụ.
Aug 24, 2010 na 9: 59 AM
N’ezie. Dika mmekorita site na ihe omuma ma obu ihe ngosiputa nke ihe omuma na ihe omuma ahia, obu ihe banyere ihe.